After a four-wicket haul from Tasmeen Granger dismissed Ireland Women for 150, a collective effort from the top order ensured Zimbabwe women chased down the target in 41 overs with five wickets in hand in the 10th game of the Women's Quadrangular Series in Potchefstroom.
After a four-wicket haul from Precious Marange restricted Ireland Women to 209, Mary-Anne Musonda and Sharne Mayers led the chase and secured a six-wicket victory to Zimbabwe Women in the fourth match of Women's Quadrangular Series in Potchefstroom.
Zimbabwe are all set to play five One-Day Internationals in June when they visit Scotland and Netherlands.
A terrific bowling performance from Afghanistan saw them dismiss Zimbabwe for just 54 runs in a chase of 161 to secure a 106-run victory by D/L method in the rain affected fifth One-Day International in Harare.
Bowlers set up series leveling win for Zimbabwe
A collective bowling effort from Zimbabwe bowled out Afghanistan for 111 following which Zimbabwe chased down the revised target of 105 with seven wickets in hand in a rain affected fourth One-Day International in Harare.
Sean Williams and Chris Mpofu picked three wickets apiece as Afghanistan collapsed dramatically losing their last five wickets for just five runs to allow Zimbabwe make an incredible comeback and secure a three-run victory in the third One-Day International in Harare to remain alive in the series.
Poonam's five-fer help Indian Women trounce Zimbabwe
Poonam Yadav registered a five-wicket haul to dismiss Zimbabwe Women for just 60 runs following which India Women reached the target in just nine overs with nine wickets in hand to continue their winning streak in ICC Women's World Cup Qualifier in Colombo.
Zimbabwe have recalled all-rounder Solomon Mire for the five-match One-Day International against Afghanistan which begins later this month.
Garth powers Ireland Women to comfortable win over Zimbabwe
Kim Garth scored a brilliant 63 and backed it with three wickets as well to help Ireland Women to a 119-run triumph in the Group A encounter of the ICC Women's World Cup Qualifier in Colombo.
Afghanistan are set to visit Zimbabwe in February for a five-match One-Day International series to be played in Harare.